Hubless yakakandwa simbi pombi dzevhu uye zvigadzirwa zvinoshandiswa mukukambaira mafambiro emabasa. Iyi mapaipi uye zviguti zvakagadzirirwa kusiri-kudzvinyirira mashandisirwo, sekusarudzwa kweiyo saizi yakakodzera yehutsanana dhayeti, marara, vent, uye nedutu dhizaini dhizaini. Iwo mapaipi ari centrifugal anokanda, musasa mamiriro, akasununguka kubva pacholehole porility uye anouraya, yakatsiga pamusoro uye kunyange madziro ukobvu.
Stainless Simbi Couplings neRubber Petrkets
Hapana-hub couplings akagadzirwa kuti aunganidze No-hub cast iron simbi uye zviguti, akakanda iron iron nemapombi epurasitiki kana mapaipi ebhuronzi.Izviunganidziro zvinoumbwa neyemhando yepamusoro elastomeric yakapetwa gasket yakaiswa mukati meiyo simbi isina simbi yematare.
Iyo ductile simbi mapaipi inogadzirwa zvinoenderana ne ISO2531 / EN545 / EN598 / NBR7675 yepasi rese. Ductile yakakandwa simbi imhando yemhando yesimbi, carbon uye silicon. Munguva yekugadzira, tinotora bvunzo pamutsetse zvakasimba uye zvinhu zvekuyedza zvinosanganisira: hydraulic kumanikidza, simendi yakadzika ukobvu, zinc kupururudza ukobvu, bitumen coating ukobvu, kupimisa bvunzo, kunoorora test uye zvichingodaro. Kunyanya, isu tine yakanyanya yepamusoro X-ray detector yekuyera madziro kukobvu kwepipi yega yega chaizvo kuti tikwanise kuona mapaipi emhando inoenderana neyakajairwa.
Kuchovha: Epoxy Resin Paints & Powder Coating, bitumen coating.
Manhole Covers anogadzirwa kuti avakirwe uye ishandiswe paruzhinji.Murume wemvura une furemu uye chifukidzo uye / kana grating. Manhole chifukidzo chinogona kuchengetedza zviri nani kuchengetedzwa kwevanofamba netsoka nemotokari, uye inogona zvirinani kudzivirira mvura uye zvimwe zvinwiwa kuti zvisapinda. Manhole Covers ichave yakapfava uye isina magodhi ejecha, maburi anoputika, kukanganisa kana chero humwe urema.
Kuchovha: Nhema bitumen Kujeka kwega kwega kwakaganhurwa kusvika pakukosha kwe3mm
Giredhi: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN
1. Tinogona kugamuchira OEM sevhisi.
2. Chishongedzo: Carbon simbi, Low alloy simbi, Stainless simbi, Heat kupikisa simbi, Tool simbi, etc.
3. Kugadzira Maitiro: investment kukanda.
4. Pamusoro pekurapa tekinoroji: chrome kuronga, zinc plating, mhangura plating, nickel plating, anodic oxidation yealuminium alloy, phosphating, bhurawu, kusviba, passivation, carburizing, nitriding, kupfapfaidza uye zvimwe zvikamu zvemukati kurapwa tekinoroji.
5. Dhizaini: Sese maererano nemabatiro evatengi, zano & masampuli.
6. Kukanganwira uye profiles zvinoenderana ne GB, ASTM, BS, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, JIS, ISO uye zvimwe zvinhu zvakatsanangurwa.
Tinogona kupa ese marudzi ese pasina-hub fittings ayo anogona kusangana EN877 DIN19522 yakajairwa, uyezve akawanda akakosha maficha maficha anogona kupihwa.
Izvo zvigadzirwa zviri 100% zvinodzoreredzeka uye zvinodzoreredzeka, zvine mutsindo wekutumira, moto chiratidzo, hunhu hunoburitswa uye hunopokana. Izvo zvinoshandiswa zvakanyanya kusimudzira mvura kubva kuzvivakwa, madhiramu, marara uye vent. Zvakare chirongwa chemvura yekunaya chakaiswa kunze kwezvivakwa uye chakavigwa pasi pevhu chinogona kupihwa. Mapaipi akaisirwa muzvivakwa zvekugara nedzimba, mahotera, zvipatara nemamall ezvitoro.
Iyo EN877 yakakandwa masimbi masimbi mukati uye nekunze kubatika iri tsvuku epoxy resin nehupamhi hweinosvika 70um, epoxy poda ine ukobvu hwakati wandei 120um ine ruvara rutsvuku.
Iyo yakasviba simbi inoenderana ne ISO185, mapaipi akakodzera machira ekugadzira zvimisheni zvinhu zvinosimbisa simba min 150Mpa. Maximum Brinell kuomarara HB260.
Kunze uye mukati mekunze kwakanyanya kunaka. Yemukati yekubatira kupikisa kune munyu kupuruzira: zvingangoita 350h, zvakajairika maawa mazana manomwe. kuramba mvura inoparadza; mazuva makumi matatu anosvika makumi maviri neshanu pamadhigiri makumi maviri neshanu centigrade.chemical kuramba kubva paF2 kusvika PH12 mazuva makumi matatu nemakumi maviri neshanu pamadhigirii makumi maviri neshanu. kuramba kupisa kutenderera: 1500 mizunguko kubva pakati pe15-93 degree centigrade.
Hubless cast iron iron fittings inonyanya kushandiswa kune drainpipe kuburikidza nekubatana kunobatana. Chigadzirwa chacho chawana zvachose miitiro, ASTM A888, CISPI301, uye ine zvinotevera zvinobatsira: flat uye yakatwasuka, kunyange pipi madziro, kusimba uye hushoma, kukwirira pamusoro pa iyo yemukati neyekunze kwemadziro, hapana zvinokanganisa pakawanikwa, kuiswa nyore, kuchengetedza zviri nyore, hupenyu hwakareba, inobatsira nharaunda, isina moto uye isina ruzha.
Kubika: Mukati uye kunze Bituminious pendi kuturika
Masayizi: 1.5 ″, 2 ″, 3 ″, 4 ″, 5 ″, 6 ″, 8 ″, 10 ″, 12 ″, 15 ″
Kanda Grey Iron Pipe Uye Fittings Chemical Inosangana P ＜ 0.38 S ＜ 0.15 Cr ＜ 0.50 Ti ＜ 0.10 Al ＜ 0.50 Pb ＜ 0.015 C + （Si + P) / 3 CE ＞ 4.10
Grey Iron Mechanical Properties ＞ 145Mpa